‘Munotikoshera imi vanhukadzi’ | Kwayedza
‘Munotikoshera imi vanhukadzi’
25 Mar, 2021 - 10:03 2021-03-25T10:03:48+00:00 2021-03-25T10:03:48+00:00 0 Views
Mamwe emadzimai anoshanda semasocial workers ayo ari kubatsira mukurwisa chirwere cheCovid-19
HURUMENDE inopembedza mabasa ari kuitwa nevanhukadzi avo vakazvipira kubatsira mukurwisa chirwere cheCovid-19 munharaunda dzavagere (social workers) kusanganisira kupepa varwere nekupa dzidziso yakakosha pamusoro pedenda iri.
Vachitaura pakucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women’s Day (iro rakanonoka kupembererwa) nemusi weChitatu svondo rino, gurukota revashandi nekubatsirwa kwevanoshaya – Professor Paul Mavima – vanorumbidza vanhukadzi nemabasa avari kuita mubudiriro yenyika muzvikamu zvakasiyana.
Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa8 Kurume uye gore rino rakaitwa pasi pedingindira rinoti, “Madzimai ari muhutungamiriri: Kuwaniswa Kwebudiriro Yakaenzana Munguva YeCovid-19”.
Prof Mavima vanoti vanhukadzi vanoshandira munharaunda ava vari pamberi mukurwisa chirwere cheCovid-19 kana zvichienzaniswa nevanhurume vanoita basa rimwe chetero.
“Shanduko yose yakaunya munyika apo chirwere cheCovid-19 chakaderera ibasa ramaibata imi masocial workers echidzimai nekuti ndimi vazhinji. Munozvipira upenyu hwenyu kunoshanda munzvimbo dzakaomarara kunyanya panguva iyo chirwere cheCovid-19 changa chiri kunyanya kutyisa chichitora upenyu hwevakawanda.
“Zvino tinoda kuti madzimai atore chikamu che52 percent muzvigaro zvepamusoro, zvikuru pakuve nhengo dzedare reParamende kuitira kuti pave nekuenzaniswa kwemikana,” vanodaro.
Prof Mavima vanoti madzimai ndiwo anotarisana nemitoro mizhinji sekupepa varwere, kuona kuti mhuri dzadya nekuchengeta mhuri asi vachishanda zvekare mabasa akasiyana, nokudaro vanofanira kupembedzwa.
“Tinofanira kurwisa dzimwe tsika dzinobatsira mukumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai pamwe nekubvisa rusarura,” vanodaro.